I-eczema kubantwana | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Isizathu se-atopic dermatitis
Amanyathelo aqabulayo kwi-atopic dermatitis
Itches, you scratch. Itshekisha kwakhona, uqala ngakumbi. Kuze kube sekugqibeleni yonke into iyichukumisa kwaye igazini. Yintoni esele ilukhuni kubantu abadala, akunakwenzeka kubantwana: bayeke ukukhangela xa le nto ingabonakaliyo inetha kwi-atopic dermatitis.
Kodwa yintoni i-atopic eczema?
Kwi-15% yabantwana bonke abachaphazelekayo kwesi sifo, abantu abadala abaqhelekanga kakhulu. Kwi-atopic dermatitis - ebizwa ngokuba yi-atopic eczema-ifom e-rash, kunye nekhumba elomileyo, elithinteka kakhulu.
Indlela yokugcina i-ecophe yase-atop kubantwana
Ingaba isifo eso sikhona, sinokumiselwa ngesikhumba. Ukuba ubuncinci i-3 imigaqo kunye nemiqathango encinci ye-3 idibeneyo, isifo siqinisekile. Kakade ke, nangona kunjalo, iingcebiso zengcali yezobugcisa kufuneka zifumaneke!
Ukusabalalisa okuqhelekileyo (izibini, amadolo, intamo, isisu)
Isifo sesifo seentsapho (i-asthma, i-allergies, i-atopic dermatitis)
Ukuphendulwa kwesikhumba esimhlophe kunomfanekiso obomvu emva kokutshiza
Ukungavumelani kwengubo yeboya
I-Dermatitis ijikeleze iimbumba ezungeze
Omnye unokuthanda ukucinga ngexesha langoku malunga nezifo zeli hlabathi-ngaphezu kwazo zonke izifo eziyaziwayo - ngokupheleleyo ukukhanyiselwa. Ngelishwa ukuhlupheka kwabantu abaninzi akunjalo. Ngokungafaniyo, umzekelo, inwele yezilwanyana ezinokuthi "Umntwana wakho unobungozi kumahashe"Isizathu kufuneka sithathwe ngokungqongqo.
Omnye uthetha apha ngezinto ezibangeleyo kunye nempembelelo yezinto, ezinokubangela ukuba isigulane sifakwe. Ukuze uphathwe kwesi sifo, akusizi kunciphisa iimpawu, kodwa okokuqala, izizathu kufuneka zixazululwe.
Kwaye uluhlu lwezizathu ezinokwenzeka lude kwaye lunzima:
Ukuxinezeleka okanye uxinzelelo kwengqondo emzimbeni (umz. Ukudandatheka)
Ubuthakathaka baluphi na uhlobo (umzekelo, iinwele zezilwanyana, i-pollen, uthuli lwendlu okanye ukutya kokutya)
imozulu (umzekelo ubanda kakhulu okanye isomiso)
Ubume bendalo bubuthelela njengefuthe zomoya
Ukuhlamba okungafanelekanga kwesikhumba
Iimpembelelo zeHormon ezifana nokukhulelwa
Uyabona ngesiseko semizekelo embalwa: izizathu ezinokuba zikhona. Uncedo apha "disease dayariUkukhokela. Bhala ngokucophelela oko ukwenzileyo, udliwe okanye uzive ngexesha leentsuku.
Ukuthi: "Isifo sedayari" sinokukunceda nakwezinye izifo ezifana ne-acne. Ngokusekelwe kulo, kunokwenzeka ukufumanisa isizathu apha. Umzekelo wento eyenzeka ngokwenene ngulo: Makhe sibize umntu wethu Mario. UMario akazange ahlupheke nge-acne okanye ama-pimples, kodwa ngokukhawuleza babekho. Kwaye abazange bahambe. Kungakhathaliseki ukuba uthetha ntoni uMario, nokuba ngaba amayeza omama ahlala ekhaya, iimveliso eziqhelekileyo ezivela kwiyeza okanye iimali ezikhethekileyo ezivela kwi-pharmacy, akukho nto yanceda.
Ngexesha elithile uMario waqala ukugcina idayari, oko wayidla xa, yintoni eyenzayo emva kwayo kwaye kunye. Ekuhlalutheni kwakhe kamva, wafumanisa ukuba wayethola isanda lakhe kwisonka esitsha rhoqo ekuseni ngeenyanga ezimbalwa. Ekugqibeleni uMarto wagweba umquki weebhaki ngexesha lokulinga kwiiveki ze-2 ... kwaye kwaba yintoni umphumo? Ngokunene, iimpumpo zahlala zide zagqitywa ngokupheleleyo. Umpheki weebhaki kufuneka wasebenzise isithako esithile sokuba umzimba kaMario wawungumzimba, kwaye ngenxa yoko, i-acne yenziwe.
Njengoko sele sele kuchaziwe, inyathelo lokuqala kukuphelisa isizathu sokuba kulungiswe ngokufanelekileyo isifo. Abantwana abagulayo bahlala bexolisa kakhulu, ngakumbi ukuba ngaba ngumntwana wabo kwaye kukhwaza kunye neentlobo zokubetha. Ukunciphisa okungenani le nto, sibeke iingcebiso ze-5 ezifanele ukukhupha ukukhupha, kunye nokukhawuleza:
Njengoko kuthethwa ngento ebonakalayo njengoko kuzwakala: musa ukukhangela! Nangona sele sele kunzima kubantu abadala kwaye mhlawumbi kungeke kwenzeke kubantwana, ukukhangela kunciphisa intlungu ngexesha elifutshane kakhulu, kodwa emva koko kubuya nefuthe elikhulu le-boomerang. Umjikelo onobuqhetseba!
Ukuthi: Ukuthintela ukutshitshiswa okungafunekiyo, umzekelo, ebusuku xa ulala, kunceda ukusika iminwe imfutshane kwaye ugqoke iiglavu zekotoni.
Ukubhalwa kweti emnyama
Yenza i-wraps ye-tea engapheliyo kwaye uyibeke kwiindawo ezichaphazelekayo. Ngama-tannin avelisa umgca wokukhusela apho ulusu lulahlekelwa ngumswakama omncinci (khumbula, ulusu olunomileyo!) Kwaye kuhlahlela ngokufanelekileyo.
Kulungile kunye nekhilimu yendalo okanye ioli. Ngokomzekelo, ioli ye-argan ye-argan ifaneleke apha. Ioli ye-Argan yindalo yemvelo, ioli ye-vegan enomxholo ophezulu we-antioxidants yemvelo kunye ne-vitamin E, ekhupha ukukhupha kwaye inika isikhumba esibalulekileyo. Ulwazi olungakumbi malunga neoli ye-argan ...
Njengoko sele sele ibhaliwe ngaphezulu kwengcinezelo inokubangela isizathu. Kule meko, ukuzithoba umzimba kunokunceda ukwandisa inhlalakahle yakho kwaye, ngenxa yoko, kunciphisa ukubetha.
Ukucoca ngokufanelekileyo & owomileyo
Xa uhlambalaza, ungawuguqula amanzi ashushu, njengokuba oku kukhanda isikhumba. Emva koko misa isikhumba endaweni yokugqithisa, dab ngendwangu kunoko, ukuphepha ukhupha olungadingekile esikhumbeni. Kubalulekile apha emva kwesikhumba ukuvuselela kwakhona kunye nekhefu.
Ukukhuthaza ubuchule kubantwana
Izityalo ze-Balcony - iimpazamo ekunyamekeleni ... ...
Ukuziphatha kakuhle kwisiphepho ... abantwana
Ukufunda okunenjongo kunceda ngemisebenzi yezibalo
Yakha izindlu zeentaka Tinker nabantwana
Yenza iikhwama ezinomsoco kunye nabantwana
Igadi kunye nabantwana
Yenza intloko yentloko kunye nabantwana ngokwakho